Dhaqanka carabta | Wararka Safarka
Mariela Carril | | dhaqanka
Waxaan ku noolnahay adduunyo kala jaad ah waana kala duwanaanshaha naga dhigaya mid aad u xiiso badan sida noocyada. Maanta waxaan arki doonnaa Dhaqanka carabiga, tixgelinta, laakiin isla markaa isku dayaya inaan ka fogaanno sawirka ay warbaahintu sida caadiga ah na siiso.
Baro, baro, qiime, ixtiraam, kuwani waa ereyada sixirka ah ee wada noolaanshaha dhaqan wanaagsan. Maanta, markaa, dhaqanka carabtu wuxuu noqon doonaa halyeeyada maqaalkeenna.
Marka hore waa inaad taas fahanto Dhaqanka carabta iyo diinta islaamku waa isku dhawyihiin. Sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, illaa 2017, waxaa lagu qiyaasay intaas tirada dadka adduunka ee Carabtu waxay ahayd 414.5 milyan oo inta badan loo qaybiyey 22 dal waxay ku yaalliin Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Turkiga iyo Iiraan kuma jiraan kooxdan maxaa yeelay waxay ku hadlaan af Turki ama Farsi.
In kasta oo deegaanka ay ka jiraan diimo kale Islaamku waa diinta ugu weyn, qiyaastii 93% dadku waa Muslimiin Masiixiyiintuna waxay matalaan 4% isla aaggan. Islaamka waxaa xukuma Quraanka, buug la rumaysan yahay inuu nebi Muxammad u muujiyey Ilaahay laftiisa isaga oo u maraya malakul Jibriil. Shareecada Islaamka waxaa loo yaqaan Shareecada waxayna noqotay qayb lama huraan ah dastuurada iyo xitaa sharciyada cilmaaniga ah ee dalal badan.
Shareecada, el camino, waa aasaaska nidaamka qiimaha carabta oo dhan. Waxay u qaybsan tahay shan qaybood: aasaaska cadaaladda, waxbarashada, anshaxa guud iyo tan gaarka ah, ka hortagga dhibaatooyinka shaqsiyadeed ee bulshada, iyo kahortagga dulmiga. Runta ayaa ah waddan kasta oo Carab ahi diinta Islaamka siyaabo kala duwan ayuu ugu fasiraa, qaarkood way ka adagyihiin kuwa kale xitaa waxay leeyihiin ciqaab dil (goynta gacmaha tuugada, tusaale ahaan).
Muslimiinta waxay tukadaan shan jeer maalintii nolosha oo dhanna waxaa lagu abaabulaa shantaas daqiiqadood. Haweenka masaajidda ku lebbisan si lebbis ah ayeyna u xirtaan madaxyadooda, qof walba kabaha ayuu iska siiyaa ragga iyo dumarkuna weli gooni bay u yihiin. Intii lagu guda jiray Iyo Raadaam oo ahaa bishii sagaalaad, oo quduus ah, sida ku xusan kalandarka muslimiinta, dadku way soomaan qorrax ka soo bax ilaa qorrax dhaca.
Dhaqanka carabta qoysku waa muhiim iyo qaab isku xirnaanta qabaa'ilka loo ilaaliyo, iyo sidoo kale isku xirnaanta qabiilka. Oraahda "Walaalahay iyo anigu waxaan ka soo horjeedaa ilmaadeeraday, ilmaadeeraday iyo aniga iyo shisheeyaha," waxay si fiican u iyaga u tilmaamaysaa. Abtirsiinyadu sidoo kale waa muhiim. Waa dhaqanka aabanimada taas oo uu ninku reerkiisa ku daryeelo oo haduusan awoodin ay ceeb tahay. Hooyadu waxay leedahay door dhaqameed waxayna joogtaa guriga, barbaarinta caruurta, maaraynta guriga.
Carruurta si kala duwan ayaa loo barbaariyaa, iyadoo kuxiran hadday yihiin lab ama dheddig. Carruurtu waxay ka baxaan guriga markay is guursadaan oo guud ahaan midkood ayaa jooga guriga waalidkood si uu u daryeelo. J) Haa, Dhaqanka carabtu waa ixtiraamaa odayaashiisa. Waxaa lagala tashadaa arrimo badan, xitaa marka waxa ay sheegaan aan daruuri loo aqbalin. Nidaamyada caafimaad ee dalalkan badiyaa ma wanaagsana, sidaa darteed haweenka da'da yar waxay inta badan ku tiirsan yihiin hooyooyinkood ama sodohda soddohda u ah korinta carruurtooda.
Dhaqanka carabta sidoo kale waxay ka maseyrsan tahay asturnaanteeda iyo arrimaha qoyska si dhif ah ayaa looga wada hadlaa kahor qof uun. Asturnaantaan waxaa loo tarjumay qaab dhismeedka guryaha, halkaas oo ay jiraan aagag guud oo martida lagu qaabili karo iyo meelaha aysan waligood geli doonin.
Waa sidee xiriirka ka dhexeeya Carab iyo booqde? Waxa caadiga ah ayaa ah haddii aan galno qol ay ku sugan yihiin Carab inay u kacaan inay na soo dhoweeyaan. Haweenka lama taabto, ilaa ay naagta carabta ahi gacanta soo taagto marka hore, lama hadlaayo sidoo kale kahor intaan laguu soo bandhigin, nin carab ahna lama weyddiisto xaaskiisa ama gabdhahiisa
Keenida hadiyad, sida dhaqamo kale oo badan, waa waxa ugu edeb badan ee la sameeyo. Ha diidin casuumaadda cabitaanka waana inaad marwalba isticmaal gacantaada midig markaad wax cuneyso, wax cabeyso ama aad dhaafeyso cuntada iyo cabitaanka. Cunnadu waxay muhiim u tahay dhaqanka Carabta, wadaagga rootiga, cunista kalluunka iyo wanka.
Ma wax ka duwan baa jira dharka carabta? Runtu waxay tahay in caadooyinka ay ku kala duwan yihiin waddan ka dal, mararka qaarkood waxaa jira dhar qaran ama haweenku waa inay isticmaalaan xijaabka ama a siihoreysey qarinaya jirkiisa oo dhan. Kuwa kale, dharku waa reer Galbeed.
Wax kastoo, had iyo jeer waa sax in la daboolo meelaha qaarkood iyadoo loo eegayo xishoodka: garbaha iyo gacmaha. Taas macnaheedu maahan in gabdhaha ugu casrisan, wadamada ugu casrisan, aysan xiran shaati gacmo gaab ah ama joonis maqaar ah Laakiin, haa, haddii aan u safreyno dal carbeed, waa inaan xiranaa dhar suubban.
Waa run inay yihiin aagag kulul midkoodna uu doonayo inuu xirto dhar gaagaaban laakiin halkaan haweeneydu weligeed ma isticmaasho dharka noocan ah, sidaa darteedna, waxaan helaynaa feejignaan aad u xun. Waxaa laga yaabaa in Dubai ama dalal kale oo ku yaal aaggan ay ka dabacsan yihiin, laakiin waa inaanan iloobin sida dhaqanka carabtu yahay.
Hadda, wixii ka baxsan astaamaha dhaqanka Carabtu leeyahay maanta, oo aad loogu baahan yahay markaad safrayso, waa inaad taas ogaataa Dhaqanka carabtu waa hodan meelkasta oo aad ka eegtid. The suugaanta carabigae waxaa ka buuxa khasnado, isku mid muusig iyo dheel iyo tan iyo xornimadii, kuwii gumeysanayay dalalka Yurub, shineemo. In wax yar laga barto iyada ayaa had iyo jeer wanaagsan, maxaa yeelay way na taajirtaa.
Hadda, dabcan, haweeney ahaan waxaa jira arrimo badan oo aanan jeclayn. Inbadan oo maanta ah, in meelo badan oo adduunka ah waxaan udagaalameynaa xuquuqdeena sida bulshada adduunka ah. Laakiin rajo ayaan qabaa waana isku dayayaa ha noqonin mid qowmiyadeed.
Waxaan doorbidayaa in aan u maleeyo in dhaqanku yahay sida afka oo kale. Kulligeen waan dhaqan nahay haddaynu nahay kuwa xambaara dhaqan ama dhaqan kale, ilaa iyo inta dhaqankaasi nool yahayna marwalba way isbadali kartaa. La mid ah carrabka. Sidaa darteed, adduunka adduunka ku nool ee aan ku nool nahay ayaa ku riixaya dhammaan dhaqammadaas dhaqameed in ay beddelaan. Waxaan rajeyneynaa in haweenka doonaya isbeddellada wanaagsan ee dalalkan ay awood u yeelan doonaan inay ku sii socdaan waddadooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » dhaqanka » Dhaqanka carabta
Lausanne, oo muhiim u ah magaalada Switzerland